honeysara's blog on decentralized web
I own crypto. I own my life.
H-O-D-LI'm not selling I Love cryptocurrency, @honeysara
Up Only $HIVEI love hive. I love cryptocurrency, @honeysara
Do or die $NUDo you know $NU. $NU is one of my favourite . I love cryptocurrency, @honeysara
ပြန်ဝယ်နေပါပြီPaypal, Hive, Steem , USDT, DOGE ပြန်ဝယ်နေပါပြီ။ Kbz, Wavemoney ရ
Bull flags everywhere!!!Goodmorning all Please pump my $DASH . I love cryptocurrency, @honeysara
1 Hive = 1$Binance Top Gainer $HIVE Congratulation Hive Community. I Love cryptocurrency, @honeysara
BNB can change your life!BNB holders Cheers I Love Cryptocurrency, @honeysara
Crypto Never Sleepနိုင်ငံရေးတွေ မကောင်းဘူး အားလုံးပဲ ဂရုစိုက်ကြနော်။ ကျွန်မ ဝမ်းသာမိတာ တစ္ခုက ကွိုင်တွေဈေးတက်နေလို့ပါ။ Breaking News Tesla has bought $1.5 billion of #Bitcoin. I Love Cryptocurrency. @honeysara
ကွိုင်တွေ ကွက်တွေ မလုပ်တော့ပါဥပေဒ ထွက်လာတော့ Buy/sell နားလိုက္တာ....အတော်အကျိုးရှိသွားတယ်။ အရာအားလုံးဟာ ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါ။ Exchange လုပ်တုန်းက နောက်မှပေးမယ်နော်နဲ့ မရလိုက်တာတွေ အများကြီး ။ မိသားစုနဲ့လဲ အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ အခုတ
Binance AirdropBinance က TWT 100 အလကား လာပေးတယ်ဟ။ ကြည့်ကြဦး။ 13$ ပေါ့😂 အဲ့ဒီ TWT 100 ကို ဇန္နဝါရီ ၅ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ုထုတ်ရပါမယ်။ မထုတ်ဘဲ ထားရင် မရေတာ့ပါဘူး။ ထုတ်နည်းကို ဒီမွာ သွားဖတ်ကြည့်ကြပါနော်။